Shira Ummata Oromoo irratti agaamame balfuuf Partiilleen Siyaasaa Oromoo walgahii cuffaa godhaa jiran. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShira Ummata Oromoo irratti agaamame balfuuf Partiilleen Siyaasaa Oromoo walgahii cuffaa godhaa jiran.
Lamma magarsaa Isatu ofii isati Agazii ajjaja rajii Oduu Simbirtuu – ሰበር ዜና – Breaking
Shira Ummata Oromoo irratti agaamame balfuuf
Partiilleen Siyaasaa Oromoo walgahii cuffaa godhaa jiran.
በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተቀነባበረውን ጥቃት ለመመከት ሁሉም የኦሮሞ ፓርቲዎች ዝግ ስብሰባ ላይ
Via Jalle Micheal
Ilmaan naafxanyootaa Jawaar akka ajjeefamu hawwiin eegaa turte milkaa’ufii dinnaan hiriira mormii ummanni Oromoo Oromiyaa keessatti gochaa jirtu jeequdhaaf habashoota qindeessaa jirti. Ifaan ifatti miidiyaa diina guddaa ummata Oromoo tahe #ESAT irratti sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jirtan bahaa ofirraa ittisaa jechuun ajaja dabarsaa jiru.
Kana malees karaa keessatiin ergaan isaan waliif dabarsan saboonni biroo ijaaramaa hiriira keessa seenaa jeeqaa jedhanii waliif daddabarsaa jiru. Mormii ummataa gara walitti bu’iinsa amantaa fi sabaatti jijjiiruf sochii guddaa gochaa jiru.
Ummanni Oromoo mirga isaaf wayyaanee gaafa falmachaa tureeyyuu ofii wareegamaa ture malee isin hin tuuqne. Hardhallee borullee Oromoon saba kamuu hin tuqu waan taheef nagayaan taa’aa.
Qeerroon Oromoo Sabaa fi sablammoota nu keessa jiran kabajuu fi eegudhaan qaamota maqaa saboota biroon hiriira jeequu barbaadan tasgabbeessudhaan walitti bu’iinsa tokkoon maletti nagayaan sagalee keenya haa dhageessifannuu.
Poolisoonni Oromiyaa nagayaan mormii ummanni dhageessifatu akka qaamni biroo keessa seenee hin jeeqne eegaa. Qaamota jeequmsa uuman seera qabsiisaa. Qeerron keessan isin hin tuquu isinis Qeerroo hin tuqinaa.
Ummanni Oromoo kan aarsaa qaalii kaffalee wareegamaa tureef mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuudha. Mootummaan federaalaa fi mootummaan Naannoo Oromiyaa gaaffii mirgaa ummanni karaa nagayaatin gaafachaa jiru ugguruuf yaaluu dhiisee ummanni karaa nagayaan mormii isaa akka dhageessifatuu fi nageenya ummataa akka eegu dhaamna.
Via: Lalisa Hussein
HNN_NEWS:Oduu Olmaa Oromiyaa.Onk.23,2019